China Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve သည် ဂီယာထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ - Allway Valve
Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Butterfly Valve > Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve
ဂီယာဖြင့် Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve
Stainless Steel Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve
Iron Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve
Carbon Steel Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve
ဂီယာပါရှိသော wafer အမျိုးအစား butterfly valve ၏ ဂီယာပစ္စည်းသည် သံ ၊ အလူမီနီယမ် .သံမဏိ သို့မဟုတ် အခြားလိုအပ်သော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်၍ ပေါ့ပါးသော၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဒီဇိုင်း၊ ကြီးမားသော အထွက် torque နှင့် လုပ်အားချွေတာပြီး အမျိုးမျိုးသော valves များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
ဂီယာပါရှိသော wafer အမျိုးအစား butterfly valve ကို ယေဘူယျအားဖြင့် DN300 ထက်ကြီးသော ကြီးမားသောသတ်မှတ်ချက်များတွင် အသုံးပြုပါသည်။
ကျစ်လစ်သော ဂီယာနှင့် ထိန်သိမ်းတည်ဆောက်ပုံ၊ pistion area အားလုံးကို torque output အတွက် အသုံးပြုသည်။ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးမှု၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်း၊ မော်ဒယ်ဟောင်း၏ပြဿနာများစွာကိုကျော်လွှားရန် ဆန်းသစ်သောပုံစံ၊ ထုတ်ကုန်စီးရီး၊ အထွက် torque နှင့် pneumatic ကိရိယာများနှင့် အမျိုးမျိုးသောအဆို့ရှင်များသည် ကိုက်ညီပါသည်။
2.Product Parameter (သတ်မှတ်ချက်)
3. ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်နှင့် လျှောက်လွှာ
ဂီယာပါရှိသော wafer အမျိုးအစားလိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော၊ သေးငယ်သောလည်ပတ်အားကို အသုံးပြုသည်။ လည်ပတ်မှု လျင်မြန်စွာပွင့်လာပြီး အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေနံ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ အပေါ့စား အထည်အလိပ်၊ စက္ကူနှင့် အခြားရေပေးဝေရေးနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများ၊ စီးဆင်းမှုကို ထိန်းညှိရန်နှင့် မီဒီယာလည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
ဂီယာပါရှိသော wafer အမျိုးအစားလိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏ကိုယ်ထည်/ဒစ်/ထိုင်ခုံပစ္စည်း။ မတူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် သတ္တုတွင်းပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် မတူညီသောပစ္စည်းများ များစွာရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် လည်ပတ်ရန် ရိုးရှင်းပြီး အမျိုးမျိုးသော မီဒီယာပိုက်လိုင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဂီယာပါရှိသော wafer အမျိုးအစားလိပ်ပြာအဆို့ရှင်တွင် မူရင်းဒီဇိုင်း၊ လက်ရာမြောက်သောနည်းပညာ၊ ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများပါရှိပြီး ISO9001 နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပါသည်။
6. ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဂီယာပါရှိသော wafer အမျိုးအစားလိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏ ကြီးမားသောစတော့ရှယ်ယာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ပေးပို့ချိန်သည် တိုတောင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ရထားပို့ဆောင်ခြင်း၊ လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သို့မဟုတ် အခြားအရာများ။ အာမခံကာလ 12-18 လဖြစ်သင့်သည်။
မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီက ဒီလိုစက်ကိရိယာမျိုးကို ဘယ်နှစ်နှစ်လောက် လုပ်ခဲ့တာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရွယ်အစားအလိုက် စက်ကိရိယာများကို ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ပါသလား။
မင်းရဲ့စက်ရုံက လေဆိပ်နဲ့ ဘယ်လောက်ဝေးလဲ။
တီယန်ကျင်းလေဆိပ်ကနေ ၁ နာရီခန့်
Jinnan ခရိုင်၊ Tianjin မြို့။
သင့်တွင် အသေးစိတ်နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တပ်ဆင်မှုလက်စွဲရှိပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသေးစိတ်နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တပ်ဆင်မှုလက်စွဲကို ပေးနိုင်ပါသည်။
နမူနာပေးပါသလား။ အခမဲ့ သို့မဟုတ် အခကြေးငွေ ?
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပမာပေး၍ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
BL ပြပြီး ရက် 30 အကြာ။
hot Tags:: ဂီယာပါရှိသော Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ရောင်းချသူများ၊ လက်လီ၊ ဝယ်ယူ၊ စက်ရုံ၊ တရုတ်၊ စျေးပေါသော၊ ဈေးနှုန်းသက်သာသော၊ စျေးနှုန်းစာရင်း၊ ကိုးကားချက်
လက်ကိုင်ပါရှိသော Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve
PTFE ထိုင်ခုံပါသော Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve
Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve သည် Electric Actuator ပါရှိသည်။
လိပ်စာ: Yingfu လမ်း၏တောင်ဘက်ခြမ်းရှိ Yingpanquan ရွာ၊ Xiaozhan မြို့၊ Jinnan ခရိုင်၊ Tianjin တွင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Valve အမျိုးအစားနှင့် မော်ဒယ်နံပါတ်
Valve အမျိုးအစား Method of valve figure number ကိုယ်စားပြုမှု
မူပိုင်ခွင့် © 2021 Tianjin Allway Valve Co.,Ltd. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။